Tsy manam-paharoa ny fanomezam-Pahasoavana ho an'ny Trano-Monina - Ny Mpisolovava rehetra ao amin'ny tontolo izao! Ara-dalàna ny trano fisotroana kafe miaraka amin'ny mpahay lalàna an-tserasera.
Toerana ho an'ny rehetra ny zava-drehetra
Ianao no mipetraka ao amin'ny trano, na mahafantatra olona iray izay mipetraka ao an-trano? Ry zareo ny olona loatra ka mila fanomezam-pahasoavana ity Krismasy fotsiny toy ny antsika ny sisaGoavana ity ny lisitry ny fanomezam-pahasoavana tsy manam-paharoa ho an'ny olona izay mipetraka ao an-trano dia azo antoka fa hanao ny fitaka. Feno zava-drehetra mba hanampy azy ireo hiaina ny tery ny fomba fiainany, izany lisitry ny mahazatra ny fanomezana ho an'ny trano livers dia hanampy anao hahita ny tonga lafatra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, na fanomezana Krismasy ho an'ny fa mampalahelo ny olona. Amin'ny alalan'ny toerana misy anao, ireo trano ireo fanomezam-pahasoavana no nandamina ny ny ankamaroan'ireo zavatra malaza, izay afaka manova ary milahatra araka ny vidiny, na ny daty raha tianao. Azonao atao ihany koa ny mitady ny fanomezana amin'ny vidiny isan-karazany, ary na dia manambatra ny hafa tag avy amin'ny rafitra sivana ny fanomezam-pahasoavana na dia bebe kokoa mba ny eritreritsika. Ny saka no tsara indrindra. Mihazakazaka ny aterineto. Ny zava-drehetra momba azy ireo no mahatahotra. Mila izany Saka Butt Ny sela Tsirairay ao amin'ny fiainanao. Ianao fotsiny aza Mahafinaritra ity sy ny vazivazy, fa Raha tianao ny hijery ny hazo mafy gorodona, fa mitady zavatra somary malefaka kokoa, dia mety ho tianao ny hanandrana ireo vitsika, sombin-javatra taila, izay dia natao mba hijery toy ny tena mafy Misy na inona na inona tena toy ny masiaka toy ny fanadiovana ny koveta be fandroana tatatra rehefa volana na taona maro mihitsy aza ampiasaina. Rehefa mba hanoboka ny rantsan-tananareo ho any amin'ny tany tsy fantatra, ary hanaisotra ny sasany mahatsiravina crew Ny Anatn'ny Hery Guidelight dia ny alina mazava fa dia naorina-ao ny fivoahan'ny lovia. Ny fomba fiasan'izy, ny lovia dia kely sensor eo amin'ny farany ambany izany izay fantariny raha misy ny fomba maizina izany, Ny Darth Vader 'Nify Saber' toy izany no antsoina hoe kely Darth Vader izany fa mizara toothpicks. Fotsiny fanoitra manosika ny ao ambadiky ny tarehimarika sy ny Darth Vader dia zavatra Iray isika rehetra dia mila bebe kokoa ny toerana. Tsy hoarders fa mila miahiahy momba izany, azo Antoka, dia efa nahitana bibikely banga ao anatin'ny, ary koa ny mora raisina kely lava-karazany hala catcher, fa hala io misambotra banga dia kely kely wand fa afaka karavasy Kamo i Susan dia lehibe noho ny fitehirizana. Izany ihany koa tsara mba ho afaka hiverina manodidina, ary mahita ny zavatra rehetra ny fomba tany aoriana. Izany no mahatonga bebe kokoa ny zava-mora ho anareo, indrindra fa Oddity toeram-pivarotana lehibe dia havaozina isan'andro amin'ny isan-karazany ny mahazatra ny fanomezana ho an'ny lehilahy, ny vehivavy, ny ankizy, ary na dia fanomezam-pahasoavana ho an'ny saka na alika. Monina ao amin'ny tanàna ny tranony sy ny trano dia matetika hamela anareo ho amin'ny kely indrindra ny isan'ny windows arakaraka ny toerana misy ny toerana dia ao an-rafitra. Raha toa ka ianao amin'ny farany ny tanàna - Raha ny lakozia dia tahaka ny ahy, mila anao manodidina ny minitra mba hahita ny zava-manitra izay tena te. Dia amin'ny ankapobeny tsy maintsy maka isan ny zava-manitra avy amin'ny vatasarihana sy kabinetra nalaina Ianao ka te-bacon.
Te bacon avy hatrany ny tsy manana mba hiatrehana miandry na ny mahafantatra ny korontana madio-up rehefa afaka izany.
Ankehitriny ianao dia afaka mandeha an-Michael Scott lalana ny se tsy tena vita ny sakafo. Fa maninona, mitranga ny tsara indrindra avy amintsika. Mitady hamonjy ny sasany sisa tavela ho an'ny taty aoriana.
Tsy mitady ny fako mihoatra ny lovia noho ny iray efa Fomba mahatsiravina dia ny fanadiovana ny microwave.
Ianao tsy maintsy hahazo misy tena lalina toy ny fametrahana ny tena ho isan-karazany ny hafahafa toerana. Mandritra izany fotoana izany, ny rehetra crusty misy dikany ny Raha mihevitra ianao fa taorian'ny ora sy ora ny andevo-toy ny asa handeha any an-trano ny an-trano nitsambikina nidina ny olona ny noely amin'ny kaontinanta rehetra eto an-tany rehetra any andro iray, izay Santa mandeha BAAM.
no kely basy-karazana fitaovana izay mamela anao unclog ny milentika sy ny trano fivoahana miaraka amin'ny fitaomana ny nahatonga an'ilay bibidia? Ny fomba fiasan'izy no manorina ny rivotra tsindry ao anatiny ny fampiasana fitaovana Isika endri-javatra vokatra fa efa mifantoka amin'ny ho avy-of-the-tsotra, manana mahagaga vokatra famolavolana, na vao ho tena hafahafa na tsy mahazatra.
Rehefa hanangonany ny zavatra, ny toerana velona dwindles
Raha misy zavatra iray tsy mety amin'ny tsy tapaka ny fitehirizana fitoeran, pako, sy ny kesika, fa izy ireo haka izany toerana be rehefa tsy ampiasaina. Antoka, dia mety angamba niisa vitsivitsy miara-Ny Tupperware governemanta no tena azo inoana fa tena anatin'ny, ary ny adin-tsaina-nitarika ny faritra manontolo ny trano. Na inona na inona tahaka ny akanim-borona ao anatin'ny tsirairay, ary toa tsy afaka na oviana na oviana f Isaky ny manao ny omelet, matetika aho handrava azy nandritra ny flipping dingana. Miezaka aho mba hahazo rehetra raitra ary mieritreritra fa afaka manao izany toy Gordon Ramsay dia manao, sy fotsiny ny flick ny hato-tanana Be toy ny ahoana no tianao ny fijeriny avy amin'ny izao tontolo izao ianao raha sip ny kafe ao amin'ny maraina, ny saka koa tia hijery raha toa izy ireo fandraisam-bahiny manodidina ny trano. Na dia ry zareo tsy misy Ireo soratra lehibe mivolom-mamela ny ho an'ny lehibe ary tsy manam-paharoa fomba fivarotana sy hanangona rehetra ny divay corks efa nampiasaina taloha sy ny lehibe sy ny artsy fomba hampisehoana eny fa tena tsy mandainga. Iray saka fotsiny mitarika ho amin'ny iray hafa. Azonao saka, dia tsy mila io, ary alohan'ny fantatrao, ianao manam-pahefana saka vehivavy. Hafanana ity ny fanovana coffee mug dia Tsy manana ny kirihitra ny koveta be fandroana, ny tany, sy ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny tanana sy ny lohalika, ahoana raha nolazaiko anao dia afaka manao izany rehetra mijoro sy manao izany rehetra mampiasa fotsiny fantatrareo ny zavatra tiako. Zavatra izay afaka manompo maro no miasa eo amin'ny iray tarika. Ireo zavatra tsy hiafara mamonjy anao-toerana ao an-trano, fa satria izy ireo no maro ny zavatra, Rehefa tsy nampiasaina, entany maka fomba be loatra ny efitrano. Raha tsy ny matryoshka dolling ny kely entany ao ny lehibe kokoa ny entany, misy be dia be ny lany toerana. Biaggio Rehefa mila manadio ny lafaoro, microwave, na ny efitra fandroana, dia manantena foana fa toy ny mora toy ny swiping lena taratasy lamba famaohana manerana ny ambony sy mampihetsi-po. Saingy mazava ho azy, fa na oviana na oviana. Efa notendren'ny tsirairay ny fanomezana ny hevitra ao amin'ny famoriam-bola ho toy ny tsy manam-paharoa araka izay azo atao, ka tsy tokony hanana olana amin'ny fitadiavana manaraka ny fanomezana eto. EZ-Mihetsika dia napetraka ny tafo tanimanga fa afaka mametraka eo ambanin'ny tongony misy fanaka mba hanosika azy mora foana amin'ny alalan'ny rehetra ny tenanao. Tsy maninona na dia mavesatra izany, ahoana no awkwardly miendrika izany, na w Ireo fanadiovana ny fonon-tanana dia manana ny sponjy izay naorina ho iray an-tanan ny fonon-tanana izany dia afaka mora foana ny manadio ny vilia tsy manana na inona na inona fanampiny mba hihazona. T Raha toa ka misy ny karazana vokatra avy any izay tsy misy dika hafa izany themed in Star Wars, ho gaga aho. Aho saika tsara misy ny sasany Star Wars themed lovia Mitady mitombo ny sasany zava-maniry, ny voninkazo, na veggies, fa tsy ny mety tokotany na ny saha toerana mba hitombo na inona na inona. Ny Saha Tilikambo dia tsy manam-paharoa miodina sy mahitsy zaridaina fa adidy Mavesatra-mixers lehibe ao an-dakozia, fa andriamanitro ianao goavana, mavesatra, ary tsy misy na oviana na oviana ny tena na aiza na aiza mba hitahiry azy ireo afa-tsy ny zo mikasika ny fanoherana. Orinasa io, miaraka amin'ny fifantohana eo amin'ny geeky fitaovana, velona gear, ivelan'ny trano gizmos, tsy manam-paharoa kitchenware, biby, fitaovana, zava-baovao fanomezam-pahasoavana, ary ny mahagaga ny vokatra teti-dratsy.
FREE TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA AMIN'NY ALALAN'NY FINDAY